Zaridainan’Anosy : Natolotry ny Filoha mivady ho an’ny vahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaZaridainan’Anosy : Natolotry ny Filoha mivady ho an’ny vahoaka
08/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Toerana natao ho an’ny rehetra, na Malagasy izany na mpitsidika vahiny, ny zaridainan’Anosy. Io no nambaran’ny minisitra eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy Fanajariana ny Tany ary ny Fampitaovana (M2PATE), Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, omaly, tetsy Anosy, nandritra ny fitokanana izany fotodrafitrasa vaovao izany. Tonga nanotrona izany ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, ary ireo mpikambana sasantsasany eo anivon’ny governemanta.
Ny Filohan’ny Repoblika mivady kosa no nanolotra izany zaridainan’Anosy vaovao sy nohavaozina tanteraka izany miampy ireo zaridainan’i Mahamasina ho an’ny vahoaka. Nosinganin’ny Filoham-pirenena manokana tamin’izany anefa ny vehivavy, satria mankalaza ny andron’ny 8 marsa izy ireo anio, izay andro natokana ho andron’ny vehivavy, ka hampiasa io fotodrafitrasa io.
Raha ny fanazavana mantsy, tsirian-kevitra avy amin’ny vadin’ny Filohan’ny Repoblika, Voahangy Rajaonarimampianina, ny fanatsarana ny zaridainan’Anosy. Noraisin’ny Fitondram-panjakana avy hatrany izany, ka tafiditra indrindra amin’ny tetikasan’ny Filoham-pirenena.
Ankoatra izay, dia nambaran’ny minisitry ny M2PATE, Benjamina Ramanantsoa, fa mitentina 300 tapitrisa Ar ny teti-bidin’ny fanamboarana sy fanatsarana ny zaridainan’Anosy sy Mahamasina. Nifandrombonan’ny M2PATE, ny minisiteran’ny Asa Vaventy (MTP) sy ny minisiteran’ny Rano sy ny Angovo ary ny Akoran’afo (MEEH), ary ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Fambolena sy ny Fiompiana (MPAE) sy ire o orinasa tsy miankina maromaro kosa ny asa fanamboarana sy fanatsarana, izay tafiditra indrindra amin’ilay fiaraha-miasan’ny Fanjakana sy ny tsy miankina na 3P.
Natao ho toeram-pitsangatsanganana sy fialàna voly izany toerana izany, satria ahitana toerana voatokana ho an’ny ankizy, misy fipetrapetrahana sy fakana aina ho an’ny rehetra, toerana fanaovana fanatanjahantena sy filalaovana, toa ny skate, ny tsipy kanetibe, sns. Anisan’ny goavana ihany koa, natao indrindra ho toeram-pizahantany sy toeram-pitsidihana ho an’ireo Malagasy tsy monina eto an-drenivohitra sy ho an’ireo teratany vahiny.
Noho izany indrindra, dia nanazava ny minisitra fa omena orinasa tsy miankina ny fitantanana io fotodrafitrasa vaovao io, ka anjaran’izy ireo kosa no miantoka ny fikolokoloana azy sy ny fiambenana.
Etsy andaniny, hisy ihany koa, raha ny voalazan’ny minisitra ihany, ny fanadiovana ny ranon’ny farihin’Anosy mba hanome endrika tsara ilay zaridaina vaovao mba ho toeram-pialamboly mendrika sy toeram-pitsidihana ho an’ny vahiny.